Axmed Madoobe oo sheegay in Madaxda Dowladda ay iska indho tirayaan xaqiiq jirta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtey magaalada Kismaayo ee Caasimada ku meel gaarka ah ee Jubbaland.
Madaxweynaha iyo wafidgiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Maxamed Sayyid Cabdille Xasan ku soo dhaweeyey labada Madaxweyne kuxigeen, Golayaasha Baarlamaanka iyo Xukuumada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Soo dhaweynta kadib Madaxweyanaha ayaa warbaahinta kula Madaxweynaha ayaa sheegay in Madaxda qaranku ay iska indho tirayaan xaqiiqada dhabta ah ee dalka kajirta doorashana aysan ku dhici karin ayada oo ay jirto kala qeybsanaan siyaasadeed wax heshiis lagu yahayna aan la isla meel dhigin.
Sidookale Madaxweynaha ayaa sheegay si xal looga gaaro muranka Doorashada in ay asaga iyo madaxdii kale ee Garowe ku shirtey ay Ergo u soo direen Xamar si jawaab looga keeno Madaxda DFS xal waarana looga gaaro Khilaafka Doorashada. Madaxweyanaha ayaa sheegay in ayada oo aan wax jawaab ah lagu soo celinin shir Jaraa’id lagu qabtey Xamar taasna aysan marnaba xal keeni karin.
Madaxweyanaha ayaa kula taliyey Madaxda DFS in wadahal iyo wada ogol khilaafka lagu xaliyo ee aan la gaarsiinin meel aan hadhow laga soo celin karin.
“Jubbaland waxay diyaar u tahay doorashada dalku inay waqtigeeda ku dhacdo loona maro nidaam heshiis lagu yahay gobolka ka maqana maamulkiisa iyo goobihiisa doorashada loo madax baneeyo Jubbaland taas oo ah xalka ugu haboon ee xaaladan lagaga gudbi karo” ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.